Galgala: 750 qoys oo u barakacay duleedka magaalada Boosaaso. – Radio Daljir
Galgala: 750 qoys oo u barakacay duleedka magaalada Boosaaso.
Bossaso, Apr 22 – Bulshada rayidka ee deegaanka Calmadow ee gobolka Bari ayaa sheegay in 750-qoys oo ka mid ahaa shacabka deegaanka Galgala inay barakceen, kadib dagaalo ciidamada dowladda Puntland iyo ururka Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka Galgala.
Sharma?arke Cabdirashiid Jaanle oo ah gudoomiyaha horumarinta dhalinyarada Calmadow oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa tilmaamay barakaca inuu salka ku hayo dhibaatooyin isbiirsaday oo shacabku ay kala kulmeen dagaalada u dhaxeeya ciidamada dowladda Puntland iyo Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda Puntland ayuu tilmaamay inay go?doomiyeen raashiinkii deegaanka gaari jiray, taasna ay qasab ku keentay shacabku inay u adkeensanwaayaan, waxaana dowladda uu ugu baaqday inay gaargaarto shacabka dhibaataysan oo badankoodu xiligaan deegaano ka samaystay togga Durdur ee duleedka koonfureed ee magaalada Boosaaso.
Dhinaca kale la taliyaha dhinaca amaanka ee madaxwaynaha Puntland, Axmed Xuseen Doonyaale oo aan isaguna wax ka weydiinay dadka ka barakacay deegaanka Galgala iyo qorsha dowladda ee gargaarku ay ku gaarsiinayso ayaa waxaa uu tilmaamay, dowladda inay ku dadaalayso inay gurmad u samayso shacabka dhibaataysan.